ဘေဘီလေးက ကင်းမွန် စားလို့ ရလား ....... - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေး အသက် ၆ လပြည့်လို့ solid food စစားလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းထဲကို ကင်းမွန် ကိုများ ထည့်ထားမိသေးလား မေမေတို့ရေ ….. ဒါဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရမှာ တစ်ချက်က ဘေဘီလေးက အစာမာ စစားချိန်မှာ ကင်းမွန် စားလို့ရမလား …. တည့်ရောတည့်ရဲ့လား ဆိုတာပါ။
ဒီ မေးခွန်းလေးတွေအတွက် အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ဘေဘီလေးက ကင်းမွန် စားလို့ရလား…..
ဘေဘီလေးက ကင်းမွန်စားလို့ ရလားဆိုတော့ စားလို့ ရပါတယ်။ ကင်းမွန်က ရေနေသတ္တဝါ ဖြစ်ပြီး ဘေဘီလေးတွေ စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။
ဒါဆို ဘယ်အရွယ်မှာ ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန်စ ကျွေးရမလဲလို့ သိချင်နေပြီဟုတ်။ ဘေဘီလေး အသက် ၆ လပြည့်ပြီး အစာမာတွေကို စားတတ်ချိန်မှာ စပြီး ကျွေးလို့ရပြီဆိုပေမယ့် အကောင်းဆုံးက ဘေဘီလေး အသက် ၉ လပြည့်မှ ကျွေးတာပါ။
ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန် စကျွေးချိန်မှာလည်း ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်လားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ နည်းနည်းချင်းစီ စကျွေးပေးပါ။ နောက်တစ်ချက်က နင်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ အတုံးသေးသေးလေးတွေ တုံးပြီး ကျွေးပေးဖို့ပါ။
ကင်းမွန်မှာ ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ …..
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ အမြင်အာရုံကို ကျန်းမာစေပြီး ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ omega-3 fatty acids
ကိုယ်ခံအားကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ ဆီလီနီယမ်
ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ပရိုတင်းတို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေလည်း အများအပြား ပါဝင်နေပါတယ်။
ကင်းမွန်တွေက အခြား ရေနေသတ္တဝါတွေထက် ပြဒါးဓာတ် ပါဝင်မှုနည်းပြီး ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကင်းမွန်က သက်တမ်းတိုတာကြောင့် ပင်လယ်ရေရဲ့ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းပြီး ပြဒါးပါဝင်မှု နည်းတာပါ။
ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန် ကျွေးတဲ့အခါ လတ်ဆတ်ပြီး ဆားပါဝင်မှု မရှိတာမျိုး ဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက သေချာသန့်စင်ဖို့နဲ့ မင်အိတ် မပါစေဖို့ပါ။
ကင်းမွန်က ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲ ……..
ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန်ကျွေးတာကနေ အခုလို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကင်းမွန်က shellfish မျိုးရင်းဝင် တစ်မျိုးပါ။ အာဟာရ ပါဝင်မှုများတဲ့ ပင်လယ်စာ တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကင်းမွန်မှာ ပရိုတင်း ပါဝင်မှု များသလို၊ သတ္တုဓာတ်တွေလည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အင်အားပြည့်စေဖို့ ထောက်ကူပေးမှာပါ။
ကင်းမွန်က ၁၀၀ ဂရမ်မှာမှ ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှုက ၇၅ ကနေ ၈၅ ကယ်လ်လိုရီပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးကို အာဟာရ အပြည့်အဝ ရရှိစေပြီး အဝလွန်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
ကင်းမွန်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ပရိုတင်းကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကယ်လ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပြီး ပရိုတင်း ပြည့်ဝမှုက ဘေဘီလေးကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။
ဗီတာမင် B12 နဲ့ B6 ပြည့်ဝစေတယ်
ကင်းမွန်မှာ ဗီတာမင် B12 နဲ့ B6 ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကျန်းမာစေနိုင်သလို သွေးကျန်းမာစေပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို နှလုံး ကျန်းမာစေပြီး ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီလီနီယမ် နဲ့ ဗီတာမင် E
ဆီလီနီယမ် နဲ့ ဗီတာမင် E ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ကိုယ်ခံအား နည်းစေပြီး နာတာရှည်ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးသလို ဘေဘီလေးကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။
ကဲ…. ဘေဘီလေးကို ကင်းမွန် ကျွေးပေးလို့ ရပါတယ်နော် မေမေတို့ရေ…….
When can babies eat squid? https://solidstarts.com/foods/squid/#easy-footnote-bottom-1-638570 Accessed Date 18 October 2021
Calamari for… kids!? (Yes!) https://www.towndock.com/recipes/calamari-for-kids Accessed Date 18 October 2021